Uninzi lweebrawuza zixhasa ii-cookies, kodwa ungaseta isikhangeli sakho ukuba sizenqabe kwaye singazicima nanini na ufuna. Ungayifumana imiyalelo Apha ngendlela onokuyenza ngayo kwizikhangeli ezahlukeneyo.
4) Nika ezinye izinto zokusebenziseka, kubandakanya ukulandelela ukuba sele uyinike imvume yakho ikuki
Kukho ezinye iintlobo zekhukhi ezenziwe emva kokuba undwendwele le webhusayithi. Le ndawo isebenzisa uGoogle Analytics, inkonzo eyaziwayo yokuhlalutya iwebhu esebenzisa ikuki ukunceda ukuhlalutya indlela abasebenzisi abayisebenzisa ngayo le ndawo. Ulwazi oluveliswe yicookie malunga nokusebenzisa kwakho le webhusayithi (kubandakanya idilesi ye-IP) ziya kudluliselwa zize zigcinwe nguGoogle kumaseva aseMelika. UGoogle uya kusebenzisa olu lwazi ngenjongo yokuvavanya ukusebenzisa kwakho enye iwebhusayithi, ukuqokelela iingxelo kwimisebenzi yewebhusayithi, kunye nokubonelela ngezinye iinkonzo ezinxulumene nomsebenzi wewebhusayithi kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi. UGoogle angadlulisela olu lwazi kubantu besithathu apho kufuneka benze njalo ngokomthetho, okanye apho abantu besithathu baqhubekeka ulwazi egameni likaGoogle. UGoogle akazibandakanyi nedilesi yakho ye-IP nayo nayiphi na idatha egcinwe nguGoogle.
Sebenzisa i-usb njengenkunzi yegusha
Le ndawo ayinikezeli nayiphi na ingcaciso yobuqu kubathengisi okanye kwiisayithi zomntu wesithathu. Abathengisi kunye namanye amaqela esithathu (kubandakanya uthungelwano lweentengiso, iinkampani ezinikezela iintengiso, kunye nabanye ababoneleli ngeenkonzo abanokuthi basebenzise) banokucinga ukuba abasebenzisi abanxibelelana okanye abacofa kwintengiso eyenzelwe wena okanye umxholo bayinxalenye yeqela intengiso okanye umxholo ijolise ngqo (umzekelo, abafundi kwiPacific Northwest abafunda iintlobo ezithile zamanqaku). Kwakhona, ezinye ii-cookies zomntu wesithathu zinokubonelela ngolwazi malunga nawe (ezinje ngeendawo oboniswe kuzo iintengiso okanye ulwazi lwedemokhrasi) kwimithombo engaxhunyiwe kwi-intanethi nakwi-intanethi abanokuyisebenzisa ukukubonelela ngentengiso efanelekileyo kunye noluncedo.
Ukufunda ngakumbi malunga nokhetho onalo malunga nokunciphisa ukuqokelelwa kolwazi ngamanethiwekhi omntu wesithathu, ungajonga kwiwebhusayithi Inethiwekhi yokuThengisa .
Unokuphuma ekuthatheni inxaxheba kuthungelwano lwentengiso olusekwe kumdla, kodwa ukuphuma akuthethi ukuba awusayi kuphinda ufumane intengiso kwi-Intanethi. Oko kuthetha ukuba iinkampani okhethe ukuphuma kuzo azisayi kuphinda zenze intengiso ngokusekwe kwiminqweno yakho kunye neepatheni zokusetyenziswa kwewebhu zisebenzisa itekhnoloji esekwe kwicookie.
Eli nxuwa lidibene neCMI Marketing, Inc., d / b / CafeMedia (CafeMedia) ngeenjongo zoku ukubeka intengiso kwiSayithi , kunye neCafeMedia iya kuqokelela kwaye isebenzise idatha ethile ngeenjongo zentengiso. Ukuze ufunde okungakumbi ngokusetyenziswa kwedatha yeCafeMedia, cofa apha www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-mgaqo-nkqubo
(c) Uhlalutyo lweenkcukacha manani: Le ndawo inokwabelana ngeNgcaciso engeyiyoNgcaciso kunye nolwazi oluhlanganisiweyo kunye nomntu wesithathu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho kwintengiso okanye kwiinjongo zentengiso. Akukho nkcukacha yobuqu ziya kwabelwana ngale ndlela.
(d) Iitransekshini: Ngokunxulumene, okanye ngexesha lothethathethwano lwayo nayiphi na indibaniselwano, ukuthengiswa kweeasethi zenkampani, ukuxhaswa ngemali okanye ukufunyanwa, okanye kuyo nayiphi na enye imeko apho iiNkcukacha zobuqu zinokuvezwa okanye zidluliselwe njengempahla yeshishini.
Ukukhetha ukuphuma kwiiNkonzo zeNtengiso esekwe kuMdla Le webhusayithi lilungu le Inethiwekhi yokuThengisa (NAI) kwaye ibambelela kwiNdlela yokuziPhatha ye-NAI njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi ye-NAI. Le webhusayithi ikwanamathela kwimigaqo yeDigital Advertising Alliance (DAA). Inkcazo yeNkqubo yeDAA, nceda undwendwele Iwebsite yeDAA .
Ukukhetha ukuphuma kwintengiso esekwe kuMdla ngamaQela esiThathu Ukufumana okuninzi malunga nentengiso esekwe kumdla kwi-intanethi kunye nendlela yokuphuma ekuqokeleleni ulwazi ngale njongo ziinkampani ezithatha inxaxheba kwiNkqubo yoThengiso lweNethiwekhi okanye kwiDigital Advertising Alliance, ndwendwela Iphepha lokuphuma le-NAI okanye Iphepha lokukhetha abathengi le-DAA .
ukubuyisela kwakhona abaqhubi bokubonisa
Impazamo engachazwanga yenzekile ngexesha lenkqubo yokubuyisela i-0x80070005 windows 10
indlela yokulungisa isandi kugoogle chrome
Ungathumeli njani i-snap